याे सिजनकाे आईपीएलमा प्रशिक्षकहरुकाे कमाई कति ? | Express Samachar.com
FEATURED IPL 2020 खेलकुद ताजा खबर ताजा समाचार
२ हप्ता अगाडि २ हप्ता अगाडि Abinash Thapa	0 Comments dream11ipl, ipl, ipl2020, आईपीएलमा प्रशिक्षकहरुकाे कमाई
एजेन्सी | विश्व फ्रेन्चाइजी लिगमा सर्वाधिक चर्चित र मोष्ट सेलिब्रेटेड लिगमा पर्छ इन्डियन प्रिमियर लिग । लामो समयको अन्योलपछि आइपीएल यूएईमा हुने निश्चित छ । जसका लागि सबै टिमहरु यूएईमा पुगेका छन र तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन ।
यसपटक आइपीएलमा पहिलो पटक दर्शकविना नै खेलहरु हुने भएका छन । जब जब यो प्रतियोगिता सुरु हुने संघारमा आउछ, तब विश्व क्रिकेटमा नै यसको ठुलो चर्चा हुने गरेको छ । सबैको ध्यान खेलाडीमा बढिहुन्छ । तर प्रशिक्षकको भने त्यति चर्चा हुँदैन ।
आज हामी आइपीएलमा सहभागि ८ प्रशिक्षक, जसले एक सिजनको कति तलव पाउछन भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौ ।
यो बर्ष आइपीएलका आठ टिमका प्रशिक्षकमा चर्चित पूर्व खेलाडीहरु छन । सुरु गरौ कुन टिमको प्रशिक्षकको तलव कति छ ।
श्रीलंकन लेजेन्ड्रि पूर्व क्रिकेटर जयावर्दने मुम्बई इन्डियन्स टिमको प्रशिक्षक हुन । पहिलो मुम्बईबाट नै खेलेका उनले यो बर्ष २ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँ तलव पाउनेछन ।
७‍. ट्रेभोर बेलिस
प्रशिक्षणमा निकै अनुभव बटुलिसकेका ५७ बर्षे ट्रेभोर सन राइजर्स हैदरावादको प्रशिक्षक हुन । उनले भारत, अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, इंग्ल्याण्ड जस्ता देशको प्रशिक्षक बनिसकेका छन ।
यतिमात्र होइन उनले आइपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सको पनि प्रशिक्षण गरिसकेका छन । उनको प्रशिक्षणमा कोलकाताले २०१४ मा आइपीएलको उपाधि पनि जितेको थियो । उनले यो बर्ष दुई करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँ पाउनेछन ।
६. स्टेफेन फ्लेमिङ
न्यूजिल्याण्डका सफल कप्तान तथा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी रहिसकेका फ्लेमिङ चेन्नेई सुपर किंग्सको प्रशिक्षक हुन । उनको प्रशिक्षणमा यसअघि पनि चेन्नेईले निकै राम्रो नतिजा निकालेको थियो ।
साविक उपविजेता बनेको चेन्नेईको प्रशिक्षक फ्लेमिङले यो बर्षका लागि टिमबाट तीन करोड ४० लाख भारतीय रुपैयाँ तलव पाउनेछन । उनको सम्झौता यहि बर्षका लागि मात्र रहेको छ ।
५. ब्रेन्डन म्याक्कुलम
भारतीय अभिनेता शाहरुख खानको लगानी रहेको कोलकाता नाइटराइर्डले अघिल्लो बर्षमात्र आफ्ना प्रशिक्षक परिवर्तन गरेको हो । उनकै लगानी रहेको ट्रिनबागो नाइटराइडर्सको उपाधि जिताइसकेका म्याक्कुलमले अब आइपीएलमा पनि कोलकातालाई उपाधिको लक्ष्य राखेका छन ।
कोलकाताले म्याक्कुलमलाई यो बर्ष ३ करोड ४० लाख भारतीय रुपैयाँ तलव दिनेछ । कोलकाताकै पूर्व खेलाडी तथा न्यूजिल्याण्डका पूर्व कप्तान म्याक्कुलमको टिमसँग २०२० को सिजनका लागि सम्झौता रहेको छ ।
४. रिकी पोन्टिङ
अष्ट्रेलियन क्रिकेट टिमका सफल पूर्व कप्तान पोन्टिङले दिल्लीलाई प्रशिक्षण दिन थालेको लगातार तीन बर्ष हुँदैछ । सन्दिप लामिछाने खेल्ने टिम दिल्लीका प्रशिक्षक पोन्टिङको तलव तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । उनले पनि टिमसँग हरेक बर्ष सम्झौता नविकरण गर्ने गरेका छन ।
३. एन्ड्रु म्याकडोनाल्ड
अष्ट्रेलियन क्रिकेट टिमका पूर्व खेलाडी तथा हाल राष्ट्रिय टिमका सहायक प्रशिक्षक एन्र्डुले आइपीएलमा राजस्थान रोयल्र्सको प्रशिक्षण हेरिरहेका छन ।
उनी आइपीएलमा राजस्थान भन्दा अगाडी बैंग्लोरको प्रशिक्षक थिए । सन् २०१२ र २०१३ को सिजनमा बैंग्लोरको प्रशिक्षण गरेका उनले त्यसपछि बिग ब्यास लिगमा सिड्नी थन्डर्सको प्रशिक्षण गरेको थिए ।
२०२० का लागि उनी राजस्थानको प्रशिक्षणका रुपमा अनुबन्ध भएका छन । एक बर्षे सम्झौतामा उनले तीन करोड ४० लाख भारतीय रुपैयाँ पाउनेछन ।
२. सिमोन काटिच
अष्ट्रेलियन पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक काटिचले आइपीएल पनि खेलेका थिए । उनले पञ्जावबाट एक समय क्रिकेट खेलेका खेलाडी हुन । उनी यो सिजनको आइपीएलमा रोयल च्यालेञ्जर्स बैंग्लोरको प्रशिक्षकका रुपमा रहेका छन ।
काटिचलाई बैंग्लोरले यो सिजनको मात्र चार करोड भारतीय रुपैयाँ तलव दिएको छ । उनी यो सिजनको सर्वाधिक महंगो प्रशिक्षक मध्येमा एक हुन । आइपीएलमा प्रशिक्षकको सम्झौता हरेक बर्ष परिवर्तन हने गर्छ । जसका कारण उनले टिमसँग एक बर्षको सम्झौता गरेका छन ।
१. अनिल कुम्ब्ले
भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व लेजेन्ड्री लेग स्पिनर तथा पूर्व प्रशिक्षक अनिल कुम्ब्लेले पञ्जाव टिमको प्रशिक्षक रहेका छन । उनी योबर्षको आइपीएलमा महंगो प्रशिक्षकमा एक हुन ।
प्रिति जिन्टा र नेश वाडियाको लगानी रहेको पञ्जावबाट कुम्ब्लेले चार करोड भारतीय रुपैयाँ हात पार्नेछन ।
यसरी यो सिजनको आइपीएलमा कुल आठ टिममा भारतका एक मात्र प्रशिक्षक रहेका छन भने अष्ट्रेलियाका तीन जना र न्युजिल्याण्डका दुई जना प्रशिक्षक रहेका छन ।
← अली आईपीएल खेल्न पहिलो अमेरिकी बन्दै
निजगढमा औध्योगिक ग्राम र विज्ञान पार्क बनाउन पहल हुँदै →
उखुको भुक्तानी नपाएका किसानद्वारा आत्महत्या प्रयास
करैयामाई चौथो गोल्डकप माघ १५ गतेबाट शुरु हुने